14 Qoraalo Lacag La'aan Ah Oo Loo Adeegsado Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Haddii nashqadahaagu aad u siman yihiin oo aad u baahan tahay inaad nolosha ku soo qaaddid, waxna ma aha inaad ogaato ku dheji qaabab wanaagsan dariiqa saxda ah.
Qoraalkan waxaan kuugu soo qaadaneynaa isku-darka 14 qoraal oo waraaqo ah oo nooc walba leh: mid caadi ah, mid firidhsan, da 'weyn, cadaadis, midab, midab ... Xitaa Dareenka warqadda baakadaha. Wax kastaaba waxay u socdaan si aan uga soo saarno abuuritaankeena hal-abuurnimada. Dhammaan sawirada waxaa loo sharciyeeyay adeegsiga shaqsiyeed iyo ganacsi, marka dhib kuma lahaan doontid adeegsiga si sharci ah. Aynu raacno bandhigyada!
1 Qoraallada waraaqaha ee naqshadahaaga
2 Qaabka 1
3 Midab casaan iyo buluug ah
Qoraallada waraaqaha ee naqshadahaaga
Hadaadan waligaa codsan kahor qaabab naqshadahaaga ah waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida loo isticmaalo. Marka ugu horeysa, waxaan kuu sheegayaa inay ugufiican tahay inaad kahesho qurxinta Adobe Photoshop. Sidaa darteed, nidaamka caadiga ah (haddii aad abuureyso sawir leh Sawirqaade) waa inaad ku dhammeysid sawirkaaga "saldhigga", iyadoo midabka la marinayo haddii aad rabto, ka dibna ka fur Photoshop oo aad bilowdo inaad ku darto faahfaahinta.
Waxaa jira labo siyaabo loo turjumo qaabab faylkaaga hadda jira ee Photoshop:
Faylka> Meel> (Waxaan raadineynaa sawirka su'aasha ah)> Waayahay.
Fayl> Furan Marka qaabku furmo, waxaan tagnaa Tafatir> Nuqul. Waxaan tagnaa daaqadda naqshadeynta ee Photoshop oo waxaan gujineynaa "Edit" Paste.
Kala duwanaanshaha: haddii aan isticmaalno ikhtiyaarka koowaad, qaabdhismeedka ayaa ka soo muuqan doona lakabka sida shey caqli badan. Haddii aan isticmaalno midka labaad, qaabku wuxuu u muuqan doonaa inuu yahay hal lakab oo caadi ah. Tani waa muhiim in la tixgeliyo marka la shaqeynayo, si loo doorto ikhtiyaarka aan ugu raaxeysanno.
Mar alla markii aan yeelano qaab-dhismeedka, waa arrin ku-ciyaareysa mad-madow iyo qaabka lakabka. Xitaa waan tirtiri karnaa qaybo gaar ah oo aanan u baahnayn.
Midab casaan iyo buluug ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 14 Qoraallo Qoraal ah oo loo Isticmaalayo Photoshop